R/Wasaaraha Talyaanig oo jawaab ka bixiyay naceybka iyo weerarada ka dhanka ah Caa’isha Romano. - NorSom News
R/Wasaaraha Talyaanig oo jawaab ka bixiyay naceybka iyo weerarada ka dhanka ah Caa’isha Romano.
Ra’iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa ka jawaabay weerarada naceybka ah ee ka dhanka ah Silvia Romano, oo ah gabadhii Al-Shabaab laga soo daayey, ee qaadatay diinta Islaamka lana baxday magaca Caa’isha Romano.
Hase yeeshee reysulwasaaraha dalka Talyaaniga, Conte ayaa ku jees-jeesay kuwa isku dayaya inay siyaasad ahaan uga faa’iideystaan rafaadkii ay soo martan gabadhan yar ee 24 jirka ah.
Previous articleTirokoob: 97.5% hoos u dhac ku yimid soomaalida Norway laga helay xanuunka Covid-19.
Next articleSoomaalida Norway oo 554.000 u uruuriyay gurmadka Qardho.